Google Hotel Ads | Anaovy doka amin'ny Google ny Hotelanao
Ataovy mahomby sy haingana ny Ads Google Hotel mora sy haingana - ary maimaimpoana!
Aoka mpandeha hahita ny trano fandraisam-bahiny ny fotoana ry zareo mitady ny zavatra ilaina.
Hampitombo ny famandrihan-toerana amin'ny alalan'ny mitarika avo-tsara ny fifamoivoizana mahitsy ny famandrihana maotera.
Ampitomboy ny pejinao manerana ny Google miaraka amin'ny Google Hotel Ads .
Mamorona ny Ads an'ny Hotel amiko
Izay hataon'ny mpamorona Hotel Ads ho anao:
Fakafakao ireo serivisy sy tolotra ao amin'ny hotely misy anao mba hamoronana lohatenin'andriana sy famaritana mahavariana indrindra ho an'ny Ads .
Safidio ny teny fanalahidy tsara indrindra ho an'ny Ads Hotely misy anao, ka ireo no hisehoana ireo fotoana ilain'ny olona hikaroka izay atolotrao.
Mamolavola ads faneva ads matihanina ho an'ny hotely ary alao ny sain'ireo roa famandrihana sy fijerena ireo.
Hamarino ny fizarazarana sy ny kendrena ireo Ads amin'ny Hotely anao, ka tsy mandany vola rehefa misarika ny fifamoivoizana avo lenta.
Nahoana ianao no tokony mamorona ny Hotel Ads amin'ny Clever Ads ?
Clever Ads ny tranokalanao any ivelan'ny Internet Travel Agencies ny Clever Ads amin'ny alàlan'ny fangatahana ny teny fanalahidy izay ampiasain'izy ireo mba hametrahana ny tenany. Ho ao amin'ny the spotlight ianao.
Tehirizo vola amin'ny alàlan'ny fampihenana ny vaomiera tokony handoa ny famandrinao. Izahay dia hampahafantatra ny ads anao amin'ny alàlan'ny fandoavan-tsoa ny vidin'ny CPC mora kokoa sy ny vidiny isaky ny famandrihana.
Tsy mila mikorontana ny famoronana sy ny famolavolana ads , ny misafidy teny fanalahidy ary ny fanamafisana ny kendrenao sy ny tondroinao. Izahay dia mikarakara azy rehetra!
Ampio ny manaraka vahiny mahita anao